Somaliland: “Dadku Markay Yihiin Alle Yaqaan Iimaan Leh, Amniga Ay Doonaan Ayey Helayaan..” Sheekh Dirir - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Dadku Markay Yihiin Alle Yaqaan Iimaan Leh, Amniga Ay Doonaan Ayey...
Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa sheegay in dadku marka ay Ilaahay SW adeecaan, nabadgelyo helaan, hadii ay caasi noqdaana nabadgelyo darro haleeli doonto
Sheekh Dirir oo khudbadii maanta ee salaadda Jimcaha kaga hadlay nimcada nabadgelyada iyo sida loo ilaashanayo ayaa sheegay in nimcadaa garanayaan dadka aan haysan, ee dagaalo ku dhaceen ama qaxaysa, ee dalkoodii iyo duunyadoodiiba waaya, waxaanu yidhi,
“Nimcada nabadgelyada waxa garta dadka aan haysan , ee dagaalo ku dhaceen ama qaxaysa, ee dalkoodii iyo duunyadoodiiba waaya. Dadkaa ayaa dareemi kara qiimaha ay leedahay.
Islaamku qiimo weyn ayuu siiyey, miisaan weyna wuu saaray, si dhab ahna wuu u qiimeeyey nimacada nabadgelyada ayuu sheegay Sheekh Dirir, waxaanu yidhi,
“Islaamku qiimo weyn ayuu siiyey, miisaan weyna wuu saaray, si dhab ahna wuu u qiimeeyey nimcada nabadgelyada. Waan ka tacsiyadeynayaa walaalaheena reer Muqdisho dhibaatadii ku dhacday, iyagoo dhaawac weyn ka soo gaadhay nimcada ama ka haysto.
Ha moodina dhibaatooyinka dhacaya ee Muslimka meel ay joogaanba ka dhacaya, ama kuwa aad ehel tihiin iyo jaarkiina ku dhacaya, inuu kaa maqan yahay, macnaha islaamku si can ah ayuu u fikiraa, ayuu sheegay Sheekh Dirir, waxaanu yidhi,
“Qofka Muslimka ah si caalami ah ayuu u fikiraa, walaalkaaga Afrikada dhexe lagu gawracayo ama ka Arakaan lagu gawracayo ama ka Muqisho, Ciraaq, Shaam lagu gawracay waa isugu keen mid, dhibka midkood soo gaadha, adiga wuu ku gaadhay, dadkuna way isku wada xidhan yihiin.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in qoys deganaa masaafo saddex boqol oo mitir gurri u jira masaajidka Rusheeya nin iyo xaaskiisi socdaal ku tageen Muqdisho khamiistii ama Jimcahii hore, waxaanu raaciyey,
“Qoyskaasi waxay u tageen Muqdisho inay ka qeybgalaan in qof ehelkooda oo ku dhintay tacsidiisa ka qeybgalaan, labadiiba qaraxii ayey ku dhinteen, sagaal caruur ah oo ay ka tageena agteena ayey joogaan. Dadku ma kala maqna sidaa ayey iskugu xidhan yihiin.
Nimcada nabadgelyada Ilaahay SW waxuu ugu mano sheegtay ummadii Islaamka ee nabi Maxamed NNKH horkacayey ayuu sheegay Sheekh Maxamed, isagoo yidhi,
“Ilaahay waxuu yidhi, ‘waxaad xusuusataan nabi Maxamed NNKH iyo asxaabtiisa, markaad Makka joogteen, ee tamarta yaraydeen, ee la idin dhibayee, la idin tun-jilaycsanayey Ilaahii idiin hiiliyey.
Marka qofku nabadgelyo, caafimaad iyo arsaaqdiisa haysto, noloshii aduunyada wax ka maqan ma jirto ayuu sheegay Sheekh Maxamed, isagoo yidhi,
“Marka qofku nabadgelyo, caafimaad iyo arsaaqdiisa haysto, noloshii aduunyada wax ka maqan ma jirto. Nebi Maxamed NNKH ayaa tilmaamay, ‘Bulsho-yahay kina nabadqaba, ee reerkiisa la jooga, ee jidhkisuna u caafimaad qabo, waxuu cunayey maalintaana haysta, aduunyadii wax ka maqani ma jiraan.’ Waa qiimayn uu Rasuulku NNKH saaray nolosha asaasiyaadkeeda, iyadoo Nabadgelyada loo horaysiiyey.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in Nabadgelyadu tahay natiijada iimaanka, waxaanu yidhi,
“Dadku marka yihiin dad Alle yaqaan ah oo iimaan leh, oo Ilaahay SW ka edebsaday, amniga ay doonaan ayey helayaan, laakiin hadii aanay iimaan lahayn, ilbaxnimo iyo awood kasta ha sheegtaane, ma helayaan amniga. Dunida meelaha loogu cabsi badan yahay waa Maraykanka oo dadku xagiisa eegayaan, taasina waa iimaan la’aanta. Ilaahay SW ayaa yidhi, ‘dadka Ilaahay rumeeyey, een dulmi la iman waxay helaan nabadgelyo”
Sababo nimcada nabadgelyadu ku sugnaato ayaa jira ayuu sheegay Sheekh Maxamed, waxaanu yidhi isagoo ka hadlaya,
“In Ilaahay la adeeco waa sababaha lagu helo nabadgelyada, oo dadku aanay Ilaahay SW caasiyin ama kuwo ka firdhaday oo falaagoobay noqon, ee kuwo adeecaya oo ka talloqaata doqdaan. Ilaahay SW waxuu tusaale innagu siiyey dad nabadgelyadii ay haysteen ku waayey markii ay adeeci waayeen, “magaalo iska degenayd, oo xasiloonayd oo arsaaqadeeda meel walba ka heli jirtay, marka ayey Ilaahay SW nimcooyinkiisii ayey diideen (nimcadii diinta), markaa ayuu Ilaahay SW dhadhansiiyey hugii cabsida iyo gaajada” hadii ay timaado diin la’aan cabsi, gaajo iyo qaxootinimo way imanayaan. La soco qeyb labaad insha alaah.
Somaliland: Mudaharaad Xooggan Oo Maanta Ka Dhacay Magaalada Ceerigaabo Iyo Sababta
Mursal Muuse Iyo Hodan Cabdiraxmaan Oo Hees Cusub Daawaha Ka Soo Qaaday Wakhti Ay Aroos Yihiin Daawo Muuqaal Aad u Qurux Badan